၂၀၁၁ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁၇ ရက်နေ့က လှိုင်သာယာမြို့နယ် အမေ့အိမ် အခမဲ့ ပညာဒါန စာသင်ကျောင်းကို လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သွားရောက်ခဲ့စဉ် ပြည်သူလူထု နှစ်ထောင်ကျော်ကို အမှာစကား ပြောကြားနေသည့် မြင်ကွင်း ဖြစ်ပါသည်။
“အခု အချိန်မှာ တစ်တိုင်းပြည်လုံးအတွက် မလုပ်နိုင်ပေမဲ့ ကျမတို့ တနိုင်တပိုင် လုပ်နေတာပါ။ ဒါကြောင့်မို့ တနိုင်တပိုင်လုပ်နေတဲ့ အချိန်မှာ အားပေးတဲ့ လူတွေဟာ ကျမတို့ရဲ့ တကယ့် အင်အားတွေ ဖြစ်ပါတယ်”
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဟာ ဒီကနေ့ နိုဝင်ဘာလ၁၇ ရက်နေ့ နံနက် ဆယ်နာရီခန့်က မြန်မာနိုင်ငံကို ရောက်ရှိနေတဲ့ ဗြိတိန်နိုင်ငံ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာန ဝန်ကြီး Mr. Andrew John Bower Mitchell နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗြိတိသျှ သံအမတ်ကြီး Andrew Heyn တို့ကို လှိုင်သာယာမြို့နယ်က အမေ့အိမ် အခမဲ့ ပညာဒါန စာသင်ကျောင်းကို သွားရောက် ပြသစဉ် ပြည်သူလူထု နှစ်ထောင်ကျော်ကို အမှာစကား ပြောကြားရာမှာ အခုလို ပြောဆိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျောင်းသူ ကျောင်းသား များအနေနဲ့ ငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်းက နိုင်ငံရေးကို အထိုက်အလျောက် နားလည် သင့်တယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။ နိုင်ငံကောင်းစားဖို့ ပြည်သူတွေကို အရေအတွက်တင်မက အရည်အချင်းပါ တိုးတက်စေလိုပြီး ပညာရေးနဲ့ စရမှာလို့ ခံယူတဲ့ အတွက်အခုလို ကျောင်းများ ဖွင့်လှစ်ရခြင်း ဖြစ်ကြောင်းလည်း ရှင်လင်းပြောဆိုပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြည်သူလူထု ဆင်းရဲမွဲတေမှု ပပျောက်ရေး ကိစ္စအတွက် နို်င်ငံခြားက တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ ဆွေးနွေးနေတဲ့အကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သလို အခုလည်း ဗြိတိသျှ ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးကို ဘယ်လို အကူအညီတွေ ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာ သိရှိအောင် လာရောက် ပြသခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အမေ့အိမ်ပညာရေးကျောင်းကို ရောက်ရှိလာရာမှာ ရန်ကုန်တိုင်း NLD အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ ပြည်သူလူထုက လှိုက်လှိုက်လဲလဲ ကြိုဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ ကျောင်းသူ ကျောင်းသားတွေက ဖွားဖွားစု ကျမ်းမာပါစေလို့ ကဗျာများရွတ်ဆို ဂုဏ်ပြု နှုတ်ခွန်းဆက် ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။
အေၿခခံလိုအပ္ခ်က္ ၿဖစ္တဲ. ပညာေရး၊က်န္းမာေ၇း၊ဆက္သြယ္ေ၇း ေတြကို ႏုိ္င္ငံတကာ အဆင္. မွီျဖစ္ေအာင္ အ၇င္လုတ္ေပးပါ။